Sancerre, ihunanya di na Paris | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Getaways, Ihunanya
Paris nwere aha nke obodo kachasị ịhụnanya n'ụwa ma ọ ka dị na gburugburu ya enwere ọtụtụ ebe nwere ike ịghọ njem ịhụnanya. Nke ahụ bụ ihe niile Francia ọ bụ ihe ịtụnanya nke okirikiri ala, ọdịbendị na ụtọ!
Ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ gị nọ na Paris mana ị chọrọ echiche sara mbara, okike, ezigbo mmanya na oge ịtọgbọ mmiri mgbe ahụ otu nhọrọ na usoro nke ihunanya getaways si Paris es SancerreYou nuru maka mpaghara a nke ubi vaịn, ugwu nta na obodo nta?
Sancerre na-bụ mpaghara dị na ndagwurugwu Loire, n’akụkụ ọwụwa anyanwụ, ọ dịkwa otu ihe na mmanya di ocha ọ bụ ezie na n'ezie ụdị ndị ọzọ na-mere. All, na-enwe obi ụtọ na ị nwere ike na-agụnye ha niile na gị ihunanya getaway ...
Mpaghara nwere ntụpọ obodo ochie, ubi ndị e ji okooko osisi ọhịa na ubi vaịn chọọ mma. Ọ bụrụ na ị nwere ihe osise ịhụnanya nke ime obodo French, mgbe ahụ Sancerre dabara ya dị ka uwe aka. Ọ na-agbakwunye wineries nke na-emeghe ọnụ ụzọ ha maka ndị chọrọ ịma, ụlọ ndị ọbịa mara mma ebe a na ebe ahụ, ugbo na-eme chiiz, ehi ...
Ọ bụrụ na ịgbazite ụgbọ ala ị nọ naanị gị awa abụọ site na paris Ihe dị mma bụ na enwebeghị ọtụtụ ndị njem nleta dịka na mpaghara ndị ọzọ gbara isi obodo French. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-aga na njedebe nke oge okpomọkụ ma ọ bụ na oge ọzọ nke afọ ozugbo. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị maraworị ọdịda anyanwụ nke Loire, ya na nnukwu ụlọ ya ndị a ma ama, oge eruola ka ị gaa ọwụwa anyanwụ wee chọpụta ọdịdị ala ndị a na ebe obibi ha n'oge ochie dịka Quincy, Menetou-Salon or Reuilly. Ma ọ bụ doro anya, Sancerre onwe ya.
Na mgbakwunye na mpaghara a Sancerre bụ n'aka a ochie obodo wuru n’elu ugwu nke noro n ’Osimiri Loire. Na Celtic na Roman gara aga (n'eziokwu aha ahụ na-erite «dị nsọ nye Siza », Saint-cere, Sancerre), nweela abbey Augustinian, ebe ewusiri ike na mgbidi ya karịa oge.
Ọ bụ ebe a ka ọtụtụ ndị njem nleta wineries, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na hotels na-lekwasị, nke na-eme Zọ Mmanya na ị nwere ike ịgbaso na izu ụka ịhụnanya gị.
Can nwere ike ịdabere onwe gị n'ime obodo ma rara onwe gị nye ịmata ụfọdụ n'ime ya akara ụlọ: na Bell tower nke St. Jean site na narị afọ nke XNUMX, ụlọ elu ikpeazụ nke fọdụrụ na nnukwu ụlọ ahụ (e nwere isii), mkpọmkpọ ebe nke chọọchị nke ndị Bekee bibiri na ụfọdụ ụlọ ochie na nke akụkọ ihe mere eme nke gbanwere na họtel ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ. Netwọk ya nke cobbled n'okporo ámá Ọ bụ ihe obi ụtọ ịhapụ njem na ịse foto.
Gburugburu square enwere ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ nri ọ bụkwa n’ime ha ka ị pụrụ ịnụ ụtọ ya mmanya ọcha dị na mpaghara, ndị Crotin. Restaurantlọ oriri na ọ Theụ mostụ kachasị ewu ewu bụ La Tour onye menu ya jupụtara na ngwaahịa ndị dị ọhụrụ, ọtụtụ azụ na mmanya ọcha, doro anya, ha niile jere ozi na ọnọdụ mara mma dịka ụlọ elu ochie na nnukwu echiche.
E nwekwara Ụlọ nke Sancerre, a ebe ngosi nka dị nnọọ ọhụụ ma dị egwu nke nwere teknụzụ ọgbara ọhụrụ nwere hologram na ihe niile iji gosipụta ịkọ mkpụrụ osisi vaịn, owuwe ihe ubi ya na ihe ndị ọzọ. Enwere nnukwu ubi vaịn na ndị ọzọ dị obi umeala karị ileta ọ dịkwa mma ka ị mara tupu oge eruo onye ị nwere mmasị ije ije. Ọ bụrụ na ịnweghị oke echiche, ihe kachasị mma bụ ịga n'isi ọdụ ma jụọ L'Aronde Sancerroise, otu mkpakọrịta na-anọchite anya ubi vaịn iri abụọ na mpaghara ahụ nwere ike ịdụ gị ọdụ ma dozie njem ahụ.
A ghaghi ikwu na Sancerre nwere ihu abụọ n'ezie: otu n'oge ọkọchị na otu n'oge oyi. N'oge ọkọchị ọ nwere njem n'ihi na enwere ọtụtụ ndị Parisi nwere ụlọ ezumike ebe a mana eziokwu bụ na n'èzí oge a, dịka m kwuru n'elu, mpaghara ahụ dị jụụ. Mma ahụ ka dị ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ya naanị. Mgbe ahụ enwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ metụtara mmanya ma ọ bụ chiiz ewu na-atọ ụtọ nke mere na ọ dị nso (nke kacha mma dị na Chavignol).
Ana m ekwu maka agba ịnyịnya, e nwere ọmarịcha ụzọ na-eso ụzọ ụgbọ okporo ígwè ochie, ma ọ bụ a ịkwọ ụgbọ epeepe n’elu osimiri iji leta obere agwaetiti ndị dị na Loire. Can nwekwara ike ịga igwe kwụ otu ebe gaa obodo ọ bụla dị nso, Jiri aka ya kwụọ ụgwọ, nyere ikpe ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere mgbazinye ụgbọ ala ị nwere ike ịga n'ihu, na- Guedelon, dịka ọmụmaatụ, naanị otu awa iji hụ otu esi wuo nnukwu ụlọ na usoro ochie. Kedu ka ị mere!?
Urlọ Ọ na-enyekwa anyị katidral dị egwu nke oge ochie n'ụdị Gothic, nke na-adọrọ mmasị n'èzí mana ọ dị ịtụnanya n'ime na oke ọhịa na ụlọ ekpere ndị yiri ka akụkọ si n'akụkọ. Ndị Bourne Ọ dị ezigbo nso, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ceramik nke emepụtara ebe a opekata mpe otu puku afọ. Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ inyocha ma ọ bụ ezie na anyị na-ekwu maka izu ụka, ị nwere ike ịnụ ụtọ ụbọchị anọ ma ọ bụ karịa ebe a.
Ebe ịnọ- Enwere ọtụtụ nhọrọ na ha niile dabere na akpa gị. Lelọ nkwari akụ ahụ Le Panoramic nwere ọnụ ụlọ site na euro 55 na ezi echiche, La Chanelière bụ ụlọ nkwari akụ mara mma nke na-amalite na narị afọ nke 2006 ma nwee naanị ụlọ asatọ na-elegharị anya na ime obodo. Enwekwara Château de Beuajeu, na-ele osimiri Sauldre anya ma site na narị afọ nke XNUMX. Moulin des Vrieres bụ B&B nke bidoro n’afọ XNUMX ma maka okomoko enwere ebe obibi ndị mọnk Prieurè Notre-Dame d’Orsan, ụlọ oriri na ọ hotelụ boụ mara mma nke gbara ogige, osisi mkpụrụ osisi, ubi vaịn na ohia elu gbara gburugburu.
Ebe iri nri: L'Esplanade bụ nhọrọ dị ọnụ ala ma dị ụtọ na nnukwu isi, dịka L'Ecurie. Maka nri abalị ọzọ, Auberge de La Pomme d'Ma ọ bụ na Ebe de la Mairie na nke m kpọtụrụ aha n'elu, ụlọ oriri na ọ Laụ Laụ La Tour (ya na Michelin star).
Ihe a ga-eri: chiiz ewu (otu n'ime ihe kacha mma bụ nke a na-arụ n'ugbo Chèvrerie des Gallands) na mmanya ndị obodo. White mmanya bụ kpochapụwo (Domaine Gérard Boulay ma ọ bụ Sébastien Riffault, dịka ọmụmaatụ, ubi vaịn abụọ dị mma nke ọma), mana ị nwekwara ike ịnụ ụtọ mmanya nke oge a site Alexandre Bain onye tụgharịrị mmanya ya na biodynamics na 2004. Domaine Paul na-eso ya. Cherrier, nke nwere nanị hekta 14 nke ịkọ ihe ubi na ọnụahịa dị oke ọnụ na karama mmanya ya, Domaine Pascal et Nicolas Reverdy nke na-enye nlezianya nkuzi na usoro nke viticulture na Domaine Martin na Chavignol.
Obodo mara: n'etiti ọtụtụ, Menetou-Salon, Chavignol, Maimbray, Chaudoux, Bourges, La Bourne, Pouilly, Verdigny.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Sancerre, a ihunanya getaway si Paris